पराई रूथ – Word of Truth, Nepal
नाओमीका एकजना नजिकका नातेदार (a kinsman) अर्थात् उनका पतिका नातेदार थिए। उनको नाउँ के थियो (रूथ २:१)? __________। रूथ शिला-बाला खोज्नलाई खेतहरूहुँदो जानलाई निस्केकी थिइन् जब उनी यही मानिसकै खेतमा पुगिन् (रूथ २:२)। शिला-बाला भन्नाले फसल काट्नेहरूले छाडेका बालाहरू भन्ने बुझिन्छ। साधारणतयाः ती शिला-बाला खोज्न गरीबहरू आउँथे र यसरी “उब्रेका” बालाहरू टिपेर लान्थे। इस्राएलीहरूलाई आफ्नो व्यवस्था दिनुहुँदा, परमेश्वरले यस प्रकारको दयापूर्ण प्रबन्ध समेत गर्नुभएको थियो (लेवी १९:९-१०; २३:२२; व्यवस्था २४:१९)।कृषकले आफ्नो खेतको कुना-कुनामा अन्नलाई त्यत्तिकै छाड्नुपर्थ्यो। उसले आफ्नो खेतमा कटनी गर्दा पूरै साफ गर्नुहुँदैनथ्यो। उसले गरीबका लागि प्रशस्तै अन्न छाड्नुपर्थ्यो। यो परमेश्वरको सहयोग प्रणाली थियो। तरैपनि गरीबहरू आफै खेतमा गई ती छोडिएका अन्नलाई जम्मा गर्न बेसरी मेहनत गर्नुपर्थ्यो। कतिपय राष्ट्रहरूमा आज गरीबलाई सहयोग गर्ने प्रणाली भन्दा यो फरक छ किनकि हिजआजको प्रणालीमा कतिपटक त काम गर्न नचाहने अल्छी व्यक्तिहरू हुन्छन् जसलाई सरकारले कामबिना माम दिएर इनाम दिइरहेका हुन्छन्। गैर-जिम्मेवारीपनलाई कहिल्यै इनाम दिइनुहुन्न। २ थेस्सलोनिकी ३:१० मा पढ्नुहोस् — “यदि कसैले काम गर्न चाहँदैन भने त्यसले __________ पनि।”
बोअजले रूथलाई साह्रै दया देखाए (रूथ २:८-९)। यो देखेर रूथ छक्क पर्दछिन् (रूथ २:१०) – “मैले हजुरको नजरमा निगाह किन पाएँ? म त एक विदेशी हुँ । म एक मोआबी स्त्री हुँ, म त पराई हुँ। हजूरले मलाई किन यति कृपा देखाउनुहुन्छ?” रूथ यो देशमा अनुग्रह खोज्दै र अनुग्रहको परमेश्वर खोज्दै आएकी थिइन् अनि तिनले जे खोजेकी थिइन् त्यो भेट्टाइन्।
पत्रुसले येशूलाई एक पटक भने, “हामीले _______ कुरा त्यागेका छौं र तपाईको पछि लागेका छौं” (मर्कूस १०:२८)। पत्रुस के कस्ता कुराहरू त्यागेका थिए (मर्कूस १:१६-२०)? _____________________________ ____________________________। पत्रुसले थुप्रै कुराहरू त्यागे तर उनले थुप्रै कुराहरू प्राप्त गरे। के उनले आफ्नो वर्तमान जीवनमा नै केही कुराहरू प्राप्त गरे (मर्कूस १०:२९-३०)? ________। के उनी आफ्नो भविष्यको जीवनमा समेत केही कुराहरू पाउने भए (मर्कुस १०:३०)? __________
रूथले धेरै त्यागेका थिए, तर उनले ज्यादै अनमोल र असल कुरा प्राप्‍त गरे। बोअज यो बुझ्दथे। परमेश्वरले रूथलाई उनले त्यागेका सबै कुराहरूभन्दा कयौं गुणा असल कुराहरू दिनुहुनेछ भनेर उनी जान्दथे।रूथ २:१२ मा पढ्नुहोस् – “जसको छत्रछायाँमुनि शरण लिनलाई तिमी आएकी छौं, उनै परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले प्रशस्त उपहार दिऊन्।” रूथले सबैभन्दा उत्तम निर्णय गरेकी थिइन्।उनले इस्राएलका परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उनले परमेश्वरका पखेटाहरूमुनि शरण लिने निर्णय गरेकी थिइन् (भजनसंग्रह ९१:४)। जसरी कुखरीले चल्लाहरूलाई जोगाउनलाई आफ्नो पखेटामुनि बटुल्छे, त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँको शरण लिनेहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। के मानिसहरू सबै नै परमेश्वरका सुरक्षारूपी पखेटामुनि आउने इच्छा गर्छन् (मत्ती २३:३७)? ____________। तर रूथ आइन्। उनले जीवित परमेश्वरसँग आबद्ध हुने इच्छा गरिन्! जीवित परमेश्वर, उहाँमाथि भरोसा राख्ने जोसुकैलाई पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ!
बोअज पनि एक चरित्रवान् पुरुष थिए। बोअज कुनै गलत काम गर्न चाहँदैनथे। वास्तवमा, बोअज सतहमा गलत देखिने कामसमेत गर्न चाहँदैनथे। खलामा रूथको उपस्थितिलाई मान्छेले गलत अर्थ लाउन सक्छ भनेर बोअज जान्दथे। त्यसैले अरूले थाहा पाउनु अगाडि नै रूथ त्यहाँबाट गइहालेको उनले चाहे (रूथ ३:१४)। बोअजले कुनै गलत काम गरेका थिएनन् र साथै न उनले गलत काम गरेका हुन् कि भनेर कसैले शङ्का गरेको समेत उनले चाहँदैनथे। विश्वासीहरू “दुष्टताको हरेक ______ बाट अलग” बस्नुपर्छ (१ थेस्सलोनिकी ५:२२)।
बोअजभन्दा नजिकको नातेदार पर्ने पुरुषलाई नाओमीको जग्गा किन्ने र रूथलाई विवाह गर्ने मौका दिइयो (रूथ ४:३-६)। उसको जवाफ ज्यादै चाखलाग्दो छ- “म यो काम गर्न (उद्धार गर्न) ______________” (रूथ ४:६)। यस्तो भनाइ सुन्दाखेरि हामीलाई व्यवस्थाको याद आउँछ। व्यवस्थाले कसैलाई पनि छुटकारा दिन सक्दैन! व्यवस्था लचिलो बन्न मिल्दैन, त्यसले सम्झौता गर्न सक्दैन। व्यवस्थाले मानिसलाई केवल श्रापमुनि राख्न मात्र सक्दछ (गलाती ३:१०,१३), तर ख्रीष्टले मात्र मानिसलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ (गलाती ३:१३)। व्यवस्थाले पराई रूथलाई केवल परै मात्र राख्न सक्थ्यो (व्यवस्था २३:३ हेर्नुहोस्)। व्यवस्थाले पापीहरूलाई स्वर्गबाट केवल बञ्चित मात्र गर्न सक्दछ। व्यवस्थाले मान्छेलाई केवल ऊ कति पापी छ भनेर देखाउन मात्र सक्दछ (रोमी ३:२०), तर उसलाई पापबाट छुटकारा दिन सक्दैन। व्यवस्था ऐना जस्तै हो। ऐनाले मान्छेको अनुहार कति फोहोर छ भनेर देखाउन सक्दछ, तर ऐनाले उसको अनुहारलाई सफा पार्न सक्दैन! “किनकि जुन कुरा व्यवस्थाले शरीरद्वारा कमजोर भएको हुनाले _______________, त्यही कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई…पठाईकन गर्नुभयो” (रोमी ८:३)। जुन कुरा व्यवस्थाले गर्न सकेन, परमेश्वरले सक्नुभयो!
पराई रूथले सर्वस्व छाडिन्, सर्वस्व प्राप्त गर्नलाई! अब उनी आबद्ध भएकी छिन्! उनी एक चरित्रवान् पुरूषसित आवद्ध भइन्। उनी एक महान् राष्ट्रसित आवद्ध भइन्। उनी “राजकीय पूख्यौंली” सित आवद्ध भइन्। सबभन्दा ठूलो कुरा त, उनी अब एकमात्र सत्य परमेश्वर, स्वयम् यहोवासित, आवद्ध भइन्!
हामी सबै नै बितेको समयमा रूथजस्तै थियौं! हामी परमेश्वरदेखि टाढा थियौं(एफेसी २:११-१२ हेर्नुहोस्)! “तर अब ता ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू, जो बितेको समयमा _________ थियौं, ख्रीष्टको रगतद्वारा _____________ पारिएका छौ (एफेसी २:१३)। हामी जो बितेको समयमा परमेश्वरदेखि टाढा थियौं, “हामीलाई ________________ कहाँ पुप्याउनलाई” ख्रीष्ट मर्नुभयो (१ पत्रुस ३:१८)!
पराई अन्यजातिको विश्वासयोग्यता “चुनिएका जाति” को विश्वासघात
पापी मानिसलाई उद्धार गर्न ख्रीष्ट कुन कुराको भागी हुनुभयो (हिब्रू २:१४)? _________________________________________। ख्रीष्ट एक मानव बन्नुभयो, उहाँ “आफ्ना _______________ समान हुनुपरेको थियो” (हिब्रू २:१७)। उहाँ हाम्रो नजिकको नातेदार बन्नुभयो!
– अन्धी कवियत्री फेनी जे क्रस्बी (सन् १८२०-१९१५)
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 16:59:532020-04-28 14:41:16पराई रूथ
निर्बल शिमशोनशारीरिक शाऊल